Shauceykii Reer Gabiley Maqasha Kala Quusteen ayay Xukumada Siilanyo Geel Udirtay Nasiib Daro Dhacday Weeye”Qalinkii Cabdikariin Cali Kaamil | Berberatoday.com
Shauceykii Reer Gabiley Maqasha Kala Quusteen ayay Xukumada Siilanyo Geel Udirtay Nasiib Daro Dhacday Weeye”Qalinkii Cabdikariin Cali Kaamil
Waxaa nasiib daro inteeda leeg ku ah guud ahaan bulshada reer gabiley ku ah in ay wax u sheegaan ama ay dhageystaan kuwii ay maqazha kala quusteen.isla markaana xukuumadu geela u diratey.
Waxaa xusuus mudan kii shaley kursiga mayirnimo loo maqaar saarey ee iyadoo dano siyaasadeed laga leeyahay loo caleemo saarey isla markaana sadex samo ku dhowaad ah ku fadhiyey ee hantidii umada boobey ee cashuurtii hooyooyinka sariibada fadhiyey laga qaadey ayuu guryo ganjeel ah kaga dhistey gabiley iyo hargeysa ee laga war hayo ayaa maanta ka sheekeynaya kursiga maayarka iyo kursiga xoghayaha dawlada hoose ee gabiley .
Miyaaney nusqaan ku ahayn ninka maanta shuceybkii la ogaa wuxuu kursiga gudomiyanimo kaga tegey iyo karamadii reerka halkuu dhigey inuu maanta yidhaahdo reer hebel degmada xilkama hayaan iyo marwada qarankaa aan waxba inoo ogoleyn marwada qaranku Miyaaney ahayn tii wax ka dhigtey ee hadana fadeexadii iyo hanti boobkii musuq maasuqii xadka dhaafey ee aad kursiga kaga tegey marwo aamina weris miyaanay ahayn tii kaa badbaadisey ee xilka wasiirnimo ee aanad u qalmin kuu badbaadisey .
Waxaan leeyahay aamina werisey xaal qaado
Mayar maxamed ammiin iyo xoghayaha n.a. Waxaan leeyahay umadiina u adeega kuna maamula sinaan iyo cadaalad hana dhageysanina dadka damiirkodu liito een xaaraanta iyo xalaasha kala jecleyn ogaadana in waxaad umadiina u qabataan taariikhdu ka markhaati kici doonto
Cabdikariin Cali Kaamil